Beesha Caalamka Oo War Kasoo Saartay Khilaafka Ka Taagan Doorashada 2021 – Radio Baidoa
By Webmaster	 On Jan 13, 2021
Beesha Caalamka ayaa War cusub kasoo saartay khilaafka weli hor taagan qabsoomida doorashada dalka Soomaaliya ka dhaceysa bilowga sanadkaan 2021 ee heshiiska laga gaaray.
Qoraal ay soo saareen Beesha Caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiskii 17 September uu yahay aas aaska kaliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021, isla markaana aanu jiri karin dib u furid lagu sameeyo heshiiskaas.
Beesha Caalamka ayaa caddeysay in loo baahan yahay is faham ballaaran oo loo wada dhan yahay oo laga gaaro hirgelinta heshiiska doorashooyinka, si loo xaqiijiyo kalsooni lagu qabo geeddi-socodkan.
Sidoo kale Beesha Caalamka ayaa saamileyda siyaasadeed ugu baaqday inay muujiyaan hogaan, iyadoo la tixgelinayo danta umadda iyo inay si dhakhso leh u xalliyaan muranka ka taagan qabsoomida doorashada.
Hoos ka Akhriso Qoraalka doorashada ee kasoo baxay Beesha Caalamka.
Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay aad uga walaacsan yihiin is-mari-waaga ka taagan hirgelinta hanaanka doorasho ee 17-kii Sebtember ku heshiiyeen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah. Waxaan ugu baaqaynaa saamilayda siyaasadeed ee sare inay muujiyaan hogaan iyadoo la tixgelinayo danta umadda iyo inay si dhakhso leh u xalliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyadoo loo marayo isu-tanaasul, si loosii guda galo geedi-socod doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo u dhaca sida ugu dhakhsiyaha badan.
DAAWO:-Ganacsatada Koonfur Galbeed Oo Baaq u direy DFS iyo Maamulka K/Galbeed